Xildhibaan ku baaqay in la sii daayo wariye la sheegay inuu u xiran yahay Dowladda – Kalfadhi
Xildhibaan ku baaqay in la sii daayo wariye la sheegay inuu u xiran yahay Dowladda
Xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar, oo ka tirsan Golaha Shacabka, ayaa ugu baaqay Xukumadda in la sii daayo Wariye ku xiran Muqdisho muddo 7-aad ah, iyadoon Maxakamad la hor keenin. Waxa uu sheegay in haddii wariyaha dambi lagu haysto la hor keeno sharciga, si loogu helo ama loogu waayo oo uu xuriyaddiisa u helo. “Wariyayaasha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan la wadaago xanuunka ay dareemayaan. Waxaan leeyahay hala soo daayo wariyaha, hadii sharci daro lagu haysto, sharciguna ha u shaqeeyo si cadaalad ah” ayuu yiri Xildhibaan Khaliif.
Hadalkiisa ayaa imaanaya wax yar kadib markii maanta Xoghayaha NUSOJ, Maxamed Ibraahim Macalimow, uu si adag uga hadlay wariyahaas xiran, oo lagu magacaabo Nuur Ismaaciil, isagoo ku dhaliilay Xukumadda in ay dhibaato ku hayso wariyayaasha. “Waxaan ka codsaneynaa dhamaan laamaha ay quseyso, haddii ay ahaan lahayd Baarlamaanka, gaar ahaan Guddiga Warfaafinta iyo Madaxweynaha oo ah Sharci Ilaaliyaha iney arrintaan soo fara-geliyaan” ayuu yiri Macalimow.
Kalfadhi ayaa la xiriirtay Guddiga Warfaafinta ee Golaha Shacabka ee uu Macalimow u diraayo baaqaas, waxaana Guddoomiyaha Guddigaas Xildhibaan Khaalid Macaw uu u sheegay Kalfadhi ineysan hayn war-bixinta suxufigaas xiran, laakiin ay baarayaan. Markii ay helaan xogtiisa oo dhameystiran ayuu sheegay inuu Guddigu wax ka dhihi doono.
Madiina Xaaji Cali, oo ah hooyada wariyaha xiran, ayaa u sheegtay suxufiyiinta inuu wiilkeeda ugu dambeeyey isagoo shaqada aaday, “ilaa iyo haddana ma arag” ayey tiri. Waxay sheegtay iney og tahay uun inuu u xiran yahay dowladda, laakiin loo diiday iney aragto, sida ay hadalka u dhigtay. “Waxaan ka codsaneynaa dowladdeena iney wiilkeyga si degdeg ah xuriyaddiisa iigu soo celiso” ayey tiri hooyada wariyaha xiran, Madiina Xaaji Cali.
Xildhibaano diiday mamnuuciddii uu Guddoonka Golaha Shacabku ku laalay War-bixinta Miisaaniyadda 2018-ka
Aqalka Sare oo maanta aqrinta labaad mariyey Hindise Sharciyeedka Guddiga Musuq-maasuqa